Qabribaxar	Geela Giriyaad Iyo Beeyo Garaca	Dagmada Garbaraxo	Giriyaadnews	Xarunta Awdal Ee Borama	Gobdheere Iyo Garbadadar	Geedka Nabada Giriyaad	Soodhawayntii Ugaas Cabdirashiid Ee Lafaciise
Posted on September 6, 2011 by giriyaadnews	Hargasya-(giriyaadnews) Wasiirka wasaaradda ciyaaraha, Dhallinyarada iyo dhaqanka ee Somaliland Md. Cabdi Siciid Faahiye, ayaa shalay Hotel Crown ee magaalada Hargeysa waxa uu ka furay carwo loogu magac-daray “Carwada Dayarta Somaliland,” taas oo markii ugu horraysay ka qabsoontay Somaliland. Waxa ay ahay carwo nooceeda oo kale ah tii ugu horraysay ee SONYO ku soo bandhigto dalka.
Carwadani ayaa lagu soo bandhigay Suugaan kale duwan oo ku saabsan khatarta uu Tahriibku u leeyahay Dhallinyarada, Gabayo Majaajilooyin, Heeso wadaniya Doodo, Ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo arrimo kale oo tiro badan. Waxaana halkaasi wacdaro ka dhigayn kooxaha SOCSA Group, Havoyoco Circus, kooxda geeddida nabadda, fanaanka weyn ee Nuur Aadan Jaamac (Nuur Daalacay) oo isagu madashaasi si gaar ah u gilgiley shalay kadib markii uu ka qaaday dhawr heesood oo ay ka mid tahay heestii fannaankan sida weyn loogu bartay ee “Waddaniga Dhabta Ah”. Furitaankii carwadaasi ugu horrayn waxa ka hadalay wasiirka wasaaradda Diinta iyo Awqaafka Somaliland Md. Sh. Khaliil Cabdillaahi Axmed, wasiirku waxa uu ku dheeraaday doorka muhiimka ah ee Da’yarta Somaliland ugu jirto mujtamaceeda kale waxaanu sheegay in ay dhallinyaradu tahay cududda is badal ee wax dhisi karta waxna dumin karta sidaa darteed looga baahanyahay dhallinyarada Somaliland in ay noqdaan kuwo wax dhisa. Wasiirku waxa uu dhallinyarada ku ammaanay sida ay dadaalkooda u mideeyeen ee ay isu abaabuleen qaybtoodana ka qaateen ka qayb galka hir gelinta taabba gelinta qaranka Somaliland oo ah qaran curdin ah oo mustaqbal weyn leh. Dhallinyaraduna tahay cududdii maanta ee bulshada wanaaga u hogaamin lahayd. Sheekh Khaliil waxa uu dhallinyarada uga digay dhibaatada tahriibta iyo in ay naftooda biimeeyaan isaga oo si gaar ah ugula dardaarmay in ay cilmiga bartaan oo naftooda iyo dalkooda anfacaan kana fogaadaan dhibaatooyinka balwaduhu kawga ka yihiin. Ugu dambayn Sheekh Khaliil, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxa uu bulshada reer Somaliland uga mahad celiyey sidii diirranayd ee ay uga qayb qaateen qaadhaan ururintii loogu tabarucayay walaalaha Soomaaliya ee aynu jaarka nahay. Dhinaca kale Wasiirka dhallinyarada iyo Ciyaaraha Md. Cabdi Siciid Faahiye hadaladiisiina waxa ka mid ahaa “Maanta dadka halkan ku sugan waa dhallinyaro oo dadka reer Somaliland ka ah 70% waanan ku faraxsanahay inaan Wasiir-kiinii ahay, waxa aan idinku dhiiri galinayaa inaad Dalkiina hurumarkiisa ka qayb qaadataan, in aynu isku duubaano oo aynu ka wada shaqayno ilaalinta Nabadeena.”
Dhinaca kale waxa isagu madashan hadalo kooban ka soo jeediyay ku xigeenka waaxda suuq geynta iyo xidhiidhka dadweynaha shirkadda TELESOM Md. Cali Maxamed Saalax (Cajab) oo hadalo qiimo leh dhallinyarada kula dardaarmay. Sarkaalkani waxa uu sheegay in dhallinyaradu tahay hantida ay ummadi ku faanto sidaa darteed ay khasab tahay in lagu dadaalo sidii wax loola qaban lahaa. Isaga oo dhallinyarada kula dardaarmay in ay aqoontooda kor u qaadaan, dalkooda u shaqeeyaan kuna dadaalaan sidii ay wax u qabsan lahaayeen. Guda galkii carwada waxa si habsami leh loo qaadaa dhigay geeddi socodkii barnaamijka oo isgu jiray aqoon korodhsi, doodo, warbixino ay soo jeediyeen qaybo badan oo dhallinyarada ka mid ah sida ardayda somaliland ee wax ka barata jaamacadaha dibadda, suugaan iyo heeso waddani ah. Waxa dhallinyarada madadaalineyey kooxda qalaamo-rogadka ee Havoyoco, kooxda hiddaha iyo dhaqanka ee SOCSA Group, fanaanka Nuur Daalacay, kooxda Geeddiga Nabadda iyo suugaanyahano kale. Carwadan ayaa noqotay mid si gaar ah u soo jiidatay dhallinyaradii madasha nasiibka u heshey iyo kumanaan kale oo warbaahinta kala socday waxaanay noqotay mid ku dhammaatay si xiiso leh. giriyaadnews
Filed under: Uncategorized « Borama: Dhexdhexaadintii Culimada Ee Arrimaha Ugaaska Oo Fashilantay caalamka oo ka dayriyay abaaraha soomaliya ka jira oo laga cabsi qabo inay gobolo horleh ku fido dawo video »